Amakhwenkwe nezinto zokudlala! | Martech Zone
Amakhwenkwe nezinto zokudlala!
NgoLwesibini, Oktobha 24, 2006 NgoMvulo, Agasti 24, 2009 Douglas Karr
Andiqinisekanga ukuba ndingathatha ngaphezulu kangakanani! I-Internet Explorer 7, i-FIrefox 2, kunye neMacBook Pro zonke kwiveki enye. Ndisemva kwii-RSS feeds ngamakhulu ambalwa ezithuba, ngasemva kwi-imeyile yam malunga ne-imeyile ezingama-200… kwaye ndinomsebenzi omninzi kunangaphambili. Kwenzeka ntoni emhlabeni?
Kuqala… i-Internet Explorer 7. Ndichukunyiswe nyani ziimenyu ezizezinye kunye nolungiselelo lwescreen. Ukuba awuzange uzame, isikrini esigcweleyo siyamnandi. Kwaye, ewe, i-tabbing ilungile.
Okwesibini… iFirefox 2. Ndiyikhuphele nje. Ngokwenene uziphu! Ndiyayithanda. Khange ndivavanye ukupela kodwa ndiva ukuba yinto entle leyo. Oko kuthetha ukuba ndingalahla iGoogle Toolbar.
Okwesithathu… drumroll nceda… iMacBook Pro. Ndiyifumene imisebenzi yale njana kwaye ndihle kakhulu ngenxa yento 'epholileyo'. Ewe, emva kokuba ndiyithengile, kuye kwafuneka ndiyokuthenga ibhegi yelaptop entsha entle kwaye intle. Ndisalinde i-monster esweni emsebenzini… kodwa kwisithuba esingaphantsi kweveki, sele ndiguqukile.
Ndilayishe ukufana kuyo (WOW!) Ukuze ndibaleke i-XP xa kufuneka ndenze kwiscreen esinye (okanye efestileni) nakwi-OSX kwenye. Oko kundiphephetha nje. Andiqondi ukuba ndiza kuba sisiXhobo seWindows ixesha elide. Kuya kufuneka ndikuxelele ngenkangeleko kunye nokuziva, i-OSX ihambele phambili kakhulu kwinkangeleko, imvakalelo kunye nokusebenza. Andiyiyo i-Apple snob (okwangoku), kodwa ndinokuba yinto enye. Ndicinga ukuba okokuqala ndiya kuyivula eBorder, ndiza kuba yinto enye!
Ezinye izinto andizithandi malunga neMac? Intambo yamandla ombane ipholile kwaye konke kunjalo, kodwa elinye icala liyabamba… lelo ligunya elikhulu le-ol 'clunky. Kwaye baqinisa ngakumbi intambo yolwandiso. Uninzi loyilo lweenyawo ezincinci kangaka.
Iimpazamo ezi-5 eziBulalayo kuLawulo lweMveliso
I-imeyile 2.0 - Izicelo ze-Intanethi ze-Intanethi, iMultimedia, amaXwebhu afakwe ngaphakathi?
Okt 25, 2006 ngexesha 6:53 AM
Iikati zokuqala nezinja zihlala kunye kwaye ngoku uDoug kwi-MAC?! Nakanye!
Ehlekisayo, izolo nje umyili wethu wegraphic (inkwenkwe ye-MAC) kunye noMlawuli weeNkonzo ze-Intanethi (inkwenkwe yePC) baqonde ukuba ngokwenene bubugcisa bokulinganisa ubomi. Ikhowudi yethu yokunxiba eofisini itshintshiwe (ekugqibeleni) ukuze singanxibi tayi. Ngosuku lokuqala lwemithetho emitsha, inkwenkwe ye-MAC yeza kusebenza ingenathemba, kodwa inkwenkwe yePC yayinxibe iqhina. BAYIBA yintengiso yeApple.
Ukuba imemori iyasebenza, uDoug, uziva ubaluleke ngakumbi kwisuti. Ke oku kucenga umbuzo, kungcono ukuba uzive ubalulekile, okanye upholile?